Ukuphembelela ukufikelela ngaphandle xa kuthelekiswa nokuBhengezwa kweBrand | Martech Zone
Ukuphembelela ukufikelela ngaphandle xa kuthelekiswa nokuBhengezwa kweBrand
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 13, 2013 NgoLwesithathu, Matshi 8, 2017 Douglas Karr
UJay Baer yenye yezona zithethi zentengiso zentlalontle kunye nababhali endibakhathaleleyo. Kutshanje ubhale iposti yebhlog emnandi kunye ne-infographic ebonelela ngothelekiso olukhulu lwabaphembeleli ngokuchasene nabameli be brand.
Ukufikelela kuluntu luphawu oluphambili kuninzi lweendaba zosasazo kunye neenkqubo zangoku zonxibelelwano noluntu. Kodwa bahlala bebonakalisa ukungasebenzi ekuziphatheni okungaphaya kokuncokola. Ndabhala iposti malunga nokuba kutheni le nto ibizwa njalo Kutheni le nto ukuFikelela kwi-Intanethi kunefuthe eliGqithisileyo kunye nendlela yokuLungisa. Umcimbi omkhulu kukuba sihlala sidida abaphulaphuli nefuthe. Ukuba nabalandeli abaninzi be-Twitter akukuniki amandla okuqhuba isenzo, kukunika amandla okuqhuba ulwazi.
"Xa kuthelekiswa" iiposti ziyathandwa kodwa ayisiyonyani. Ngethamsanqa, abathengisi akufuneki benze ukhetho phakathi kokutyala imali kwisicwangciso esinye okanye kwenye. Esi sesinye sezo zicwangciso. Okokuqala, ubungqina bukwimbuyekezo kutyalo-mali. Ungafumanisa ukuba inkqubo yokufikelela kwimpembelelo yindlela efikelelekayo yokuqhubela ingqalelo kwi-brand yakho nakwinguqu elandelayo. Ukuba uyimveliso entsha okanye inkonzo, ngekhe ubenabameli abaneleyo kwaye kufuneka ubaphembelele abaphulaphuli. Okwesibini, kukho imeko yomhlambi eyomeleleyo kwiwebhu. Impembelelo inokukhokelela kubhengezo, akufuneki ukuba ibenye okanye enye.
Ndingakhuthaza wonke umntu ukuba afunde iposti kwaye ayiphonononge kwi-infographic. Iinkqubo zokukhuthaza ukuthengisa zinokuqhuba iziphumo ezimnandi… khangela ukuba yintoni Zuberance onokuyenza kuwe!
tags: ukuxhasaukuxhasa ukufikelela kuluntuUkufikelela kwibloggeruthethelelo lophawuabameli bezentengisoQinisekisa kunye nokuguqulanefutheukuthengisa okunempembeleloimpembelelo yokufikelelaabachaphazeli vs abameli be brandUJay BaerUkuqobisana
Yamkela iRay Liotta yakho yangaphakathi